MONOLITHS ကရှင်းပြသည် - ဤဘုရားသည် 'MONOLITHS' ကိုအဘယ်ကလာသနည်း။ - သတင်း
ဤဘုရားသည်သူကပြောတယ်ဆိုသော monoliths ကားအဘယ်နည်း။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က monolith ဆိုတဲ့စကားလုံးဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါပျော်နေတုန်းအဲဒီအတိုင်းပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ။ တိတ်ဆိတ် သို့သော်ယခု monolith ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်သာမကကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအောက်ပါကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုမေးနေပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် monolith ဘယ်မှာလဲ။ ဂြိုလ်သားများသည်ဤ monoliths များကိုဖန်တီးခဲ့သလား။ ဖြစ်နိုင်စရာ ငါ monolith လား ငါဘုရားသည်ဤသူကပြောတယ် monoliths ကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါအနားယူနိုင်ပါတယ်။
ကံကောင်းတာကနက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲနက်နက်နဲနဲရှာဖွေတဲ့နက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်နဲနဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့ပြီးဒီအသိပညာကိုမင်းနဲ့အတူမျှဝေမယ်။ အတူတူဒီကိုင်တွယ်ကြပါစို့။ ငါ့လက်ကိုယူ။ , ငါတို့ monolithing ပါတယ်။
အဆိုပါ monolith အဆိုပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Gala မှာလှေကားကလဲကျခဲ့သည် pic.twitter.com/IZDYB9d3KF
- လီယာဝီလျံ (@leahgwilliams) ဒီဇင်ဘာလ 6, 2020
တစ် ဦး monolith ရုံကြီးမားတဲ့ရော့ခ်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်လှည့်။ အင်းငါသိတယ် Underwhelming မရှိဘူးလား အခြား monoliths များတွင်အီစတာကျွန်း၏ကြီးမားသောကျောက်ခေါင်းများနှင့်ကျောက်ခြံများလည်းပါဝင်သည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကသတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ monoliths တွေနဲ့ငါ့ရဲ့ Twitter feed မှာတကယ့်ကိုတောက်ပနေတယ်၊ မင်းမမှားဘူး
တစ် ဦး monolith ၏အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်: ကြီးမားသောတစ်ခုတည်းသောဖြောင့်မတ်သောကျောက်တုံး, အထူးသဖြင့်တစ်တိုင်သို့မဟုတ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး အဖြစ်ပုံဖော်သို့မဟုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။ ဒါနဲ့သူတို့လည်းတောက်ပနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တောက်ပသူတွေကိုအဘယ်ကြောင့်သူတို့နေရာတိုင်းပေါ်ထွန်းနေရကုန်အံ့။
သူတို့ကတိတ်တဆိတ်ကိတ်မုန့်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ဖို့ဘယ်သူ့ကိုမှ monoliths ထဲကိုဖြတ်တောက်ခဲ့တာလဲ။
- အဲလက်စ် Zalben (@azalben) ဒီဇင်ဘာလ 7, 2020
အဘယ်ကြောင့်လူတိုင်းကဒီ monoliths အကြောင်းပြောနေတာလဲ?
ပြီးခဲ့သည့်လကုန်တွင် Utah ၌ monolith တစ်စင်းပေါ်လာပြီးလူများကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ၎င်းသည်တောက်ပသောမျှော်စင်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီးမည်သည့်အရာမျှမလုပ်ဘဲ၊ အမေရိကန်ပြည်နယ်၏ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ပြည်နယ်ရဟတ်ယာဉ်အစုအဝေးသည်ရဟတ်ယာဉ်မှသိုးများ (ချစ်စရာ) ကိုရေတွက်နေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့သည် (အကယ်၍ သင်အိပ်ပျော်သွားပြီး၊ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှပြုတ်ကျလျှင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်)
ထို့နောက်နယ်သာလန်၊ ရိုမေးနီးယားနှင့်မနေ့ကမကြာသေးမီက Isle of Wight တွင် monoliths များပိုမိုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ငါမင်းကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ McDonald's မှကြိုဆိုပါသည် pic.twitter.com/iIgd8J5QIW
- မက်ဒေါ်နယ် (@McDonalds) ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်၊
ဒီ monoliths တွေကဘယ်ကလာကြတာလဲ၊ ငါ့ကိုတည့်တည့်ပြောနိုင်မလား၊
အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်မဟုတ်။ အထွေထွေသဘောတူညီမှုမှာသူတို့သည်ပန်းပုဆရာများ၏လက်ရာများဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ကူးယူထားခြင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းသို့ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုသဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်တန်း၏မဟုတ်လျှင်ယခုအချိန်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီးသို့အချို့သော phat သတ္တုပြွန်သယ်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့ monolith Banksy ရှိပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်လူအမျိုးမျိုးတို့၏လုပ်ရပ်ဟုယူဆရန်လူအများကကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာနှင့်တူပုံရသည်။ အများကြီးပိရမစ်များကဲ့သို့။
Utah ပြည်သူ့လုံခြုံမှုဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်မည်သူမျှ monolith ကိုမည်သူမည်ဝါသွင်းထားကြောင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ Prank အုပ်စုတစ်ခုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ monoliths များကိုဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ နှင့်ရောင်းချရန်ကြိုးစားသော်လည်းအလျင်အမြန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့က Hollyweed ဆိုင်းဘုတ်အတွက်လည်းတာဝန်ရှိတယ်။
အဆိုပါ monoliths ဘယ်မှာသွားသလဲ (ဝါဂွမ်းမျက်စိဂျိုး)?
တကယ်တော့ monoliths အတော်လေးလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွား သူတို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, spooky သော။ နို ၀ င်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း Utah မှလွဲ၍ အင်တာနက် fiends များပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဝန်းကျင် မှစတင်၍ တည်ရှိနိုင်သည် (Google Maps သည်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခု) ။ သို့သော် ၄ င်း၏လေးနှစ်စိုးစံမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည် အချို့လူတို့ကဖျက်သိမ်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒါကြောင့်လည်းယခုသွားပြီရဲ့။
ထိုအခါဒီဇင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်သွားဖို့သာ, ရိုမေးနီးယား monolith ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ပွဲလမ်းသဘင်ရာသီသို့မဟုတ်ခမညျးတျောခရစ္စမတ် / တစ်စိန့်က Nicholas ကိန်းဂဏန်းမှမသိသာလင့်များရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါယုံကြည်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။
US နှင့်ရိုမေးနီးယားတွင်အလားတူအဆောက်အအုံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Isle of Wight တွင် monolith တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် https://t.co/OtUnQXkgal
- Sky News (@SkyNews) ဒီဇင်ဘာလ 6, 2020
တတိယမြောက် monolith သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်တောင်တက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးနောက်ရွတ်ဆိုစဉ်လူအများစုကဖြုတ်ချခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုက Las Vegas, ပြီးတော့နယ်သာလန်။ ဤအချိန်တွင် monolith များသည်ဗဟိုနှင့် ပို၍ ဝေးလံခေါင်ဖျားမှုဖြစ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်လူများသည်အခြား monoliths ၏ကျော်ကြားမှုကြောင့်သူတို့ကစတန့်သို့မဟုတ်ပန်းပုစီမံကိန်းကဲ့သို့သောနေရာတွင်ထားရှိသည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ (သူတို့ကမနာလိုပါပဲ) ။
ယေဘုယျအား, ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်နှစ်ပြန်ကြည့်နှင့် yeah ယောက်ျားတွေသငျသညျသူတို့အား uhhh fuckin '' uhhhh monolith သောအရာတို့ကိုသတိရကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထက်အခြားဒီထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းသစ်အကြောင်းကိုအများကြီးပြောနိုင်မဟုတ်လော ငါနှင့်အတူအဆင်ပြေတယ်။
• ညသုံးနာရီခွဲမှာ Brum Primark ကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပြီး clubbing ထက်ပိုကောင်းတယ်
• Kardashians သည် FaceTime ခေါ်ဆိုမှုဖြင့်သူတို့၏နာမည်ကျော်ကြားသူများကိုပြောင်မြောက်စေသည်
•ဤအခေါ်အဝေါ်မှာအတည်ပြုချက်အရအများဆုံး coronavirus ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူယူနီဆက်ဖြစ်သည်